Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Wamkelekile kwakhona kwi-IMEX yaseMelika ngoku Usuku nje olunye kude
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iqela le-IMEX kwindawo.
Siyakwamkela emva! Iqela le-IMEX elikwindawo lamkelekile ngokufudumeleyo kuluntu lweziganeko zoshishino lwamazwe ngamazwe ezimiselwe ukuhlanganisana kwi-IMEX America, eyenzeka kule veki.
Ngosuku nje olunye, i-IMEX yaseMelika ivula eLas Vegas eMandalay Bay.
Le yi10th Uhlelo lomsitho we-IMEX waseMelika oza kuqala ngoNovemba 9-11.
Esi siganeko sibalulekileyo sibizwa ngokuba "kukubuyela ekhaya kwishishini," kwaye sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuba senzeke eMelika emva kokuba i-US iphakamise isithintelo sayo sokuhamba ngamazwe ngamazwe.
Umboniso ubanjwe ngoNovemba 9 - 11 eLas Vegas, eyandulelwa nguMvulo we-Smart, oxhaswa yi-MPI, eyenzeka namhlanje. Iqela elikhulu leminyhadala yoshishino yehlabathi liza kuhlangana ukuze lisebenzisane, liqhube ishishini kwaye lifunde ngeli xesha libalulekileyo kweli candelo.
IMEX yaseMelika kubizwa ngokuba "ukubuyela ekhaya kolu shishino, "Kwaye kukho isizathu esikhulu sokubhiyozela kwiintsuku ezimbalwa ezizayo - kungekhona nje ukuba i-IMEX yaseMelika inekhaya elitsha, iMandalay Bay, ikwayi-10 ye-show show.
Ingqikelelo ye-IMEX yaphehlelelwa ngoSeptemba ka-2001 kunye nomboniso wayo wokuqala ngo-Epreli 2003 eFrankfurt kwiholo elikhulu laseMesse Frankfurt ngo-2005 kwaye emva koko i-IMEX America yavulwa eLas Vegas ngo-Okthobha ka-2011.
Inkqubo yomthengi osingethwe yedwa, inkqubo yokuqeshwa kwi-intanethi, i-ethos yeshishini lokuqala, kunye nendlela yobambiswano yahlula i-IMEX. Umbono wesiganeko ngowomhlaba apho ishishini elilungileyo lidlula imida kwaye apho abacwangcisi beentlanganiso zehlabathi kunye nababoneleli banokuxhuma ngokulula.
Injongo ye-IMEX ibisoloko ingaphezulu komququzeleli womboniso. I-IMEX izibeke embindini weshishini leentlanganiso, kwaye iyile imiboniso yayo ukunceda abathathi-nxaxheba bafunde, baqhagamshele, kwaye benze ishishini. Amanyathelo asele ekunye ne-IMEX ukususela ekusungulweni kwayo aquka inkqubo yeembasa, iNgcaciso yoMbutho, iiNkokeli zexesha elizayo kunye noMgaqo-nkqubo (oobebefudula bengooPolitiki) iiForam - ngoku ezidityaniswe yiminyhadala ebandakanya i-Exclusively Corporate, Uthetha iShishini, kunye ne-Smart Monday.
Inkqubo yemfundo ye-IMEX ikhule ukusuka kwiisemina ze-30 kumboniso wayo wokuqala ukuya kwi-200-plus kumboniso ngamnye namhlanje. IQela le-IMEX lisebenze kunye namaqabane ukuphuhlisa imisitho - kwaye ke aba maqabane baye bazisa iziganeko zabo kwimiboniso ye-IMEX, ukusuka kwi-SITE Nite kunye ne-MPI Rendezvous ukuya kwiintlanganiso zonyaka zamalungu e-ICCA. I-IMEX iyaqhubeka nokucokisa umgca wayo wesiganeko njengoko ishishini litshintsha kwaye likhula.
Ngelixa ishishini lisenokuba litshintshile kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye kunjalo, into engekatshintshi ngumnqweno wabantu wokuhlangana. Ubudlelwane obuqinileyo bomntu ngaphakathi kolu shishino lungundoqo kwimpumelelo yemiboniso ye-IMEX. Nangona iqela le-IMEX liphindwe kane kubungakanani babasebenzi, uninzi loovulindlela bokuqala baseyinxalenye yeqela kunye nosapho.